Arday Soomaali oo deeq Waxbarasho ka helay Jaamacado ku yaal Masar | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Arday Soomaali oo deeq Waxbarasho ka helay Jaamacado ku yaal Masar
Arday Soomaali oo deeq Waxbarasho ka helay Jaamacado ku yaal Masar
Ku-dhawaad 30 Arday oo Minxo Waxbarasho ka helay Jaamacadaha dalka Masar ayaa waxay shalay oo jimco ah ka degeen Garoonka Caaalamiga ee Diyaaradaha ee magaalladda Qaahira.
Danjiraha Somalia u jooga dalka Masar iyo Xarunta Dhexe ee Ururka Jaamacadda Carabta, Ambassador Ilyaas Sheekh Omar Abubakar ayaana Ardayda ku soo dhaweeyey Garoonka Caalamiga ee Qaahira
“Shaki kuma jiro in xiriirka Dhaqan ee ka dhexeeya Somalia yahay mid Soo-jireen ah, Masar waxay Somalia ka taageeri jirtay dhinacyo kala duwan xorriyadii kadib, gaar ahaan dhanka W/Barashada” ayuu yiri Danjire Ilyaas.
Waxa uu intaasi ku daray inay Macallimiin Masaari ah joogaan Muqdisho iyo guud ahaan Goballadda Somalia, isla markaana ay Ergada iyo Maallimiinta Al-azhar kaalin muhiim ka qaateen Faafinta Cilmiga iyo Barashadda Diinta Islaamka.
Ambassador Ilyaas Sheekh Omar Abubakar waxa uu ku ammaanay Wasaaradda Arrimaha Dibedda Masar juhdiga ay geliyeen sidii ay Ardayda Soomaalida ee Deeqda Waxbarashadda helay loogu fududeyn lahaa sidii ay ugu soo dhoofi lahaayeen Masar.
Sidoo kale, Danjiraha waxa uu u mahad celiyey Madaxweynaha dalka Masar, C/Fataax Al-sisi, wuxuuna ugu baaqay in la kordhiyo Tirada Ardayda ee Deeqda W/barsho ka hela Jaamacadaha Masar.
Bishii October ee sanadkii 2014-kii ayuu Madaxweyne Al-sisi ansixiyey in 200 Arday Soomaali ah ay sanad kasta Deeq Waxbarasho (المنح الدراسية) ka helaan Jaamacadaha ku yaalla dalka Masar.
Maqaal horeTurkiga oo si adag uga hadlay qaraxii dadka badan lagu dilay ee ka dhacay Muqdisho
Maqaal XigaShil khasaaro geystay oo ka dhacay Hargeysa